Fampianarana ambony - Mitokona ireo mpampianatra mpikaroka
Fampianarana ambony – Mitokona ireo mpampianatra mpikaroka
Publié octobre 30, 2019 par Book News
Nanapa-kevitra ireo mpampianatra mpikaroka fa hiroso tsy fidiny amin’ny fampiatoana ny asa fampianarana sy fikarohana eto amin’ny Oniversiten’Antananarivo sy ireo Foibempikarohana Nasionaly nanomboka omaly.
Fitokonan’ireo mpampianatra mpikaroka
Nitokona naomboka omaly ireo mpampianatra mpikaroka. cc: Toria Dimbiniaina
Nanatanteraka fivoriana ny mpampianatra mivondrona ao amin’ny Seces (Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka) Sampana Antananarivo, omaly Talata faha 29 Oktobra 2019. Tapaka nandritra io fivoriambe io (AG) fa hirosotsy fidiny amin’ny fampiatoana ny asa fampianarana sy fikarohana eto amin’ny Oniversiten’Antananarivo sy ireo Foibempikarohana Nasionaly manomboka androany mandra-pisian’ny vahaolana azo tsapain-tanana mikasika izany ny mpampianatra mpikaroka.
Izany no natao dia noho ny tsy namalian’ny Fitondram-panjakana ireo fangatahan’ny mpampianatra mpikarika mivondrona ao amin’ny Seces.
Taorian’ny fametrahana “préavis de grève” 72 ora, sy ny fanomezana 15 andro (“jours ouvrés”) ho fifampidinihana miaraka amin’ny mpitondra (Primatiora, MESUPRES, MEF) voakasiky ny fanatanterahana ny vahaolana natolotry ny Praiminisitra Lehiben’ny governemanta ny faha 29 Aprily 2019, dia tsy nisy fivoarana ny toedraharaha,
Miantraika amin’ny fiainan’ny mpampianatra-mpikaroka sy ny mpikaroka-mpampianatra ny tsy fahafehezan’ny tompon’andraikitry ny Ministera mpiahy ny antsoina hoe : “Asa andavanandro” na ny “Affaires courantes” toy ny fikirakirana sy fikarakarana ireo antontan-taratasy samihafa, ny maika sy ny azo ampiandrasina fotoana.
Nanamafy kosa ireo mpampianatra mpikaroka fa « hanohy ny asany raha toa ka misy voavaly ireo laharam-pahamehana amin’ny fitakiana ». Tsy hijanona kosa ny fitokonana raha tsy voavaly ny fitakiana.
Raha tsiahivina ny fangatahan’izy ireo dia ny « réclassement des enseignant chercheurs », ny « indemnité des recherche et d’investigation » ho an’ireo mpampianatra mpikaroka misotro ronono. Eo ihany koa ny fijerena ireo nangataka ny « maintien en activité » na ny « dérogation spéciale », ny fanantanterahana ny lalàna sy ny didim-panjakana izay mifehy ny fampianarana ambony.